Wasiir Eng, Yariisow “Xukuumadda Soomaaliya waa ay dhiiri gelineysaa dadka leh hal abuurka” | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasiir Eng, Yariisow “Xukuumadda Soomaaliya waa ay dhiiri gelineysaa dadka leh hal...
Wasiir Eng, Yariisow “Xukuumadda Soomaaliya waa ay dhiiri gelineysaa dadka leh hal abuurka”
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Soomaaliya Eng. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yarriisow) ayaa sheegay in Xukuumadda Soomaaliya ay dhiiri gelineyso dadka hal abuurka leh ee doonaya inay dalkooda wax cusub ku soo kordhiyaan.
Wasiirka Warfaafinta oo ka qeybgalay munaasabad lagu xusayay 11 guurada ka soo wareegtay marka la aas aasay shirkadda SOCTEC oo qaabilsan bixinta adeegyada Teknoloojiyada casriga ah ayaa sheegay in dhallinta Soomaaliyeed looga baahanyahay inay noqdaan kuwa hal abuur leh oo dalka wax ku soo kordhiya.
Eng Yarriisow ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed ee leh hal abuurka inay ka qeyb qaataan horumarinta dalkooda, oo ay noqdaan kuwa banaanka soo dhiga hal abuurkooda, si ay uga faa’iideystaan dhallinyarada.
Previous articleCiidamadda Xoogga Dalka oo qabsaday deegaanno istaariiji ah
Next articleWasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga Soomaaliya oo olole cusub ku dhawaaqday “DAAWO”